ဒေလီအိန္ဒိယလေးပါးကိုအဓိကမြို့ပြမြို့ကြီးများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အိုင်တီကုမ္ပဏီများအနေနဲ့အစဉ်အဆက်တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ, စက်ရုံတွေ, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ်များ, ဒေလီအဓိကပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အချက်အချာတစ်ဦးအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်. ဒေလီတက္ကသိုလ်က၎င်း၏ပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းများအားလုံးကိုအိန္ဒိယကျော်ရေပန်းစားသည်. ထောင့်လှည့်ပတ်ဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲနှင့်အတူ, အားလုံးတိုင်းပြည်အတွက်ကျော်ကနေကျောင်းသားကျောင်းသူများသည်ဤကောလိပ်များ၏တဦးတည်းသို့ဝန်ခံချက် secure ရန်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြ.
သင်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောကျောင်းသားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မြို့တော်အတွက်ကောလိပ်ကျောင်းသို့ဝန်ခံတဲ့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာရာအရပျမှာ. စာရင်း-အောက်မှာဒေလီတက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်ထိပ်ကောလိပ်များတချို့ရှိနေပါတယ်. ဤသည်ကိုကမ်းလှမ်းသင်တန်းများတူသောအားလုံးသင့်ရဲ့မေးမြန်းချက်များအတွက်တစ်မှတ်တိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, du ဤလူကြိုက်များကောလိပ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီစံများနှင့်အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံမှာ.
စိန့်. စတီဖင်ရဲ့ကောလိပ်, နယူးဒေလီ
မြောက်အိန္ဒိယဘုရားကျောင်းအောက်မှာတစ်ဦးကခရစ်ယာန်ကောလိပ်, စိန့်. စတီဖင်ရဲ့ကောလိပ်မြောက်အိန္ဒိယအသက်အကြီးဆုံးကောလိပ်များတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒေလီဖို့ကင်းဘရစ်မစ်ရှင်အားဖြင့်သာတည်, ကောလိပ်လက်အောက်တွင်-ဘွဲ့လွန်နဲ့ Post-Graduate သင်တန်းများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း:
B.A. စီးပွားရေး (Hons;)
B.A. အင်္ဂလိပ် (Hons;)
B.A. သမိုင်း (Hons;)
B.A. အဘိဓမ္မာ (Hons;)
B.A. Sanskrit (Hons;)
B.Sc. သင်္ချာအတတ်ပညာ (Hons;)
B.Sc. ဓါတုဗေဒပညာ (Hons;)
B.Sc. ရူပေဗဒ (Hons;)
B.Sc. အစီအစဉ် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ)
စုစုပေါင်းနှင့်အတူ 14 ဌာနဆိုင်ရာ, ကောလိပ်အမြဲအများကြီးဆည်းကပ်ထားပြီး. သကဲ့သို့မြင့်မားသော cut offs 98% အစီရင်ခံခဲ့ကြ. တောင်မှ B.A တူသောအစီအစဉ်များအတွက်. ဖြတ် offs သကဲ့သို့မြင့်မားသွားပါ 97%. အဆိုပါကောလိပ်အလွန်အမင်းတက်ကြွသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ကျောင်းသားများမှနေရာချထားအကူအညီများပေးအပ်ဆီသို့ဦးတည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုထည့်လေ့မရှိသည့်ကျောင်းသားတစ်ဦးပြေးနေရာချထားဆဲလ်ရှိပါတယ်.
ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပါ Lehman Brothers နှင့် Merrill Lynch အဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍကုမ္ပဏီများမှ, လန်ဒန်အဆိုပါစုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပါပြီ. သငျသညျ du အောက်ရှိကောလိပ်များတဝန်ခံချက်ရတဲ့အချိန်မှာရည်မှန်းနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်စိန့်. စတီဖင်ရဲ့မည်သည့်နေ့ရက်သည်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်!
ဘတ်: ကောလိပ်ကျောင်းသင့် grade ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်?
Ramjas ကောလိပ်, နယူးဒေလီ
စာရင်းထဲတွင် Next ကို Ramjas ကောလိပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒေလီတက္ကသိုလ်ကအောက်မှာထူထောင်အစောဆုံးသုံးကောလိပ်များတစ်ခုမှာ, Ramjas ကောလိပ် du အောက်မှာအခြားလူကြိုက်များကောလိပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ B.A ကနေအထိသင်တန်းများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း. B.Sc မှ. အောက်မှာ-ဘွဲ့ရလူကြိုက်များနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းကကမ်းလှမ်း Post-ဘွဲ့ရသင်တန်းများရှိပါသည် :
B.A. (Hons;) အင်္ဂလိပ်
B.A. (Hons;) ဟိန်ဒီ
B.A. (Hons;) Sanskrit
B.A. (Hons;) စီးပွားရေး
B.A (Hons;) သမိုင်း
B.A. (Hons;) နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ
B.A. (Hons;) ဂီတ
B.Sc. (Hons; ။) သင်္ချာအတတ်ပညာ
B.Sc. (Hons; ။) စာရင်းအင်း
B.Sc. (Hons;) ရုက္ခဗေဒပညာ
B.Sc (Hons;) ပါဏဗေဒ
B.Sc. (Hons;) ရူပေဗဒ
B.Sc. (Hons;) ဓါတုဗေဒပညာ
B.Sc. (Hons;) ဘဝကသိပ္ပံ
B.Sc. (အစီအစဉ်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ
အပြင်အထက်ပါဖော်ပြထားသောသင်တန်းများအနေဖြင့်ကောလိပ်မှာလည်းဘင်္ဂါလီများတွင်ဝိဇ္ဇာမာစတာကမ်းလှမ်း, အင်္ဂလိပ်, ဟိန်ဒီ, အဘိဓမ္မာ, Sanskrit, စီးပွားရေး, သမိုင်း, နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ, ဂီတနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်သုတေသန. ရူပဗေဒအတွက်သိပ္ပံ၏အရှင်ဘုရား, ဓါတုဗေဒပညာ, သတ္တဗေဒရုက္ခဗေဒ. သင်္ချာအတတ်ပညာ, စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအတွက်သုတေသနလျှောက်ထားမှုအတွက်အခြားလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. အပြင်ဤသူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်, အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမာစတာတစ်ဒီဂရီကမ်းလှမ်း.
'' အထွတ်အထိပ် '' အမည်ရှိအလွန်အမင်းတက်ကြွနေရာချထားဆဲလ်နှင့်အတူ, ကောလိပ်အမြဲသူ့ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းများမှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကူအညီနဲ့ပူဇော်ရန်၎င်း၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့. စည်းရုံးရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, Pre-နေရာချထားဆွေးနွေးပွဲ, ကျောင်းသားများအဘို့အပြောင်လှောင်အင်တာဗျူးအစည်းအဝေးများနေရာချထားဆဲလ်ကစီစဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုတချို့ရှိနေပါတယ်.
cut offs လွန်း du အောက်တွင်သည်အခြားကောလိပ်များကဲ့သို့အ Ramjas ကောလိပ်များအတွက်အလွန်မြင့်မားပါပြီ. ထက်ပိုပြီးလုံခြုံရေးတစ်ဦးကကျောင်းသား 96% ဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲအတွက်အမှတ် du ၏ဤအထက်တန်းလွှာကောလိပ်အတွက်ဝန်ခံချက် secure နိုင်ပါလိမ့်မယ်. ကျောင်းသားများကိုဒါ, သင့်ရဲ့ခြေအိတ်တက်ဆွဲထုတ်ဒီမှာဝန်ခံချက် secure ဖို့မှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုအတူပျဉ်ပြားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့!
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Shri Ram ကောလိပ်သို့, နယူးဒေလီ
စာရင်းထဲတွင် Next ကိုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Shri Ram College မှာဖြစ်ပါတယ်! အစောပိုင်းကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကောလိပ် '' အဖြစ်လူသိများ’ SRCC သည့် IIT commerce ကိုများအတွက်ကျောင်းသားများကိုဖြစ်ပါသည်. နှင့် 304 ယခုနှစ်အစီရင်ခံအောင်မြင်သောနေရာချထားမှုကို 2016, ကောလိပ်အလွန်တက်ကြွနေရာချထားဆဲလ်ရှိပါတယ်. အဆိုပါကောလိပ် B.Com ကနေအထိသင်တန်းများ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း (Hons; ။) B.A မှ (Hons;) စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အတွက်.
ဘတ်: ကောငျး COLLEGE ဝင်ခွင့်များစာစီစာကုံးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ ?
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း SRCC ကကမ်းလှမ်းသင်တန်းများ၏ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းဖြစ်ပါတယ် :
B.Com. (H ကို)
B.A. စီးပွားရေး (H ကို)
P.G. G.B.O ဒီပလိုမာ
တွင် 2017, ကို cut offs အကွာအဝေးရှိကြ၏ 95% – 97%.
SRCC ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများမကြာခဏနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီရန်ဟု! ဒေလီ၏အစိုးရအမျိုးသား Capital ၏အမွေကိုအဆောက်အဦး၏တစ်ဦးအဖြစ်တက္ကသိုလ်နယ်မြေအသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်! SRCC ၏ကွဲပြား features တွေတစ်ခုမှာ၎င်း၏ '' ဂလိုဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်’ ယူနစ်.
SRCC အမြဲဘုတ်အဖွဲ့စာမေးပွဲ toppers ၏ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုခဲ့. ဒါဟာအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကကျောင်းသားရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလည်းအနာဂတ်အတွက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုဆက်လက်ဦးမည်.
ဟိန္ဒူကောလိပ်ဒေလီတက္ကသိုလ်အောက်မှာအခြားလူကြိုက်များကောလိပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ NAAC နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးသံသရာတန်းကျောင်းသူ A + တန်းချီးမြှင့်ခဲ့သည်.
ဖြတ် offs သကဲ့သို့မြင့်မားသောအထိနှင့်အတူ 98%, စရရန်အခက်ခဲဆုံးကောလိပ်များတစ်ခုဖြစ်သည်! အဆိုပါကောလိပ် Humanities အတွက်သင်တန်းများကမ်းလှမ်း, သိပ္ပံ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံ. နှင့် 16 အင်္ဂလိပ်ကနေဓာတုဗေဒအထိဌာနများ, ကောလိပ်သင်တန်းများကို၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း :
B.A. (Hons;) သင်္ချာအတတ်ပညာ
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, ဟိန္ဒူကောလိပ်ကိုလည်းအညီအမျှကောင်းနဲ့ဆည်းကပ်ဖြစ်ပါသည်. အလွန်တက်ကြွနေရာချထားဆဲလ်နှင့်အတူ, ဤနေရာတွင်အများအပြားကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များလုံခြုံပါပြီ.
ဤရွေ့ကားဒေလီတက္ကသိုလ်အောက်ရှိထင်ရှားတဲ့ကောလိပ်များတချို့ရှိနေပါတယ်. သို့သျောလညျး, သင်တို့သည်ဤကောလိပ်များများထဲမှသို့ရရန်ပျက်ကွက်လျှင်, ပြန်သွားရကြဘူး! ကနေရာချထားမှုကိုနှင့်အခြားကျောင်းသားအဆောက်အဦမှကြွလာသောအခါအညီအမျှကောင်းသောအခြားကောလိပ်များအများကြီးရှိပါတယ်.
တစ်ဦးကအနိုင်ရ COLLEGE APPLICATION သို့အက်ဆေးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာ?
« ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ – ဒီဇင်ဘာလ 1, 2017 : စာစီစာကုံး, အကွောငျး, ကြွေးကြော်သံ, quotes, မက်ဆေ့ခ်ျ, ဘယ်လိုအခမ်းအနားကျင်းပရန်, မိန့်ခွန်း
Sridevi စာစီစာကုံး, အတ်ထုပ်ပတ်တိ, ပရိုဖိုင်းကို, မိသားစု, super-hit, Movies, နိဂုံးကို (Shridevi ဘောလီးဝုဒ်မင်းသား) »